Global Voices teny Malagasy · Jolay 2021
Tantara misongadina tamin'ny Jolay 2021
Amerika Latina28 Jolay 2021
Oseania28 Jolay 2021
Afrika Mainty26 Jolay 2021
Tantara tamin'ny Jolay, 2021
Azia Atsimo 31 Jolay 2021
Dilip Kumar dia anisan'ireo mpilalao nalaza sy mpamokatra sarimihetsika tao anatin'ny indostrian'ny sarimihetsika indiana, niasa tamina sarimihetsika 60 mahery nandritra ny enimpolo taona mahery, ary marobe ireo misaona azy.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 31 Jolay 2021
Mino ireo manampahaizana fa ny antony lehibe nahatonga an'io lalàna vaovao io dia ny fanirian'ny fanjakana hampihena ny tsy fankasitrahana sy ireo hetsika fanoherana mitombo ao amin'ny firenena.
Karaiba 31 Jolay 2021
"Ny kanto maha-LeRoy Clarke dia taranja iray, novolavolain'ilay mpanakanto iray naka aingampanahy no sady napararetran'ny fiarahamonina izay nanorotoro ny zavakantony tao anatin'ny fisiana."
Azia Atsinanana 29 Jolay 2021
"Vehivavy iray natsofoka tsy an-drariny ho ao anatin'ny lasitry ny zavamahadomelina no nandrombaka ny medaly volamena olaimpika voalohany ho an'i Filipina. Fifanandrifiana ve sa fambara? Vehivavy no olombelona mijoro farany indrindra."
Nandefa fanentanana iray hiadiana amin'ny fomba fanao iray mitera-doza antsoina hoe "Jarda" ny governemanta ao Angôla. Jarda, fomba fanao iray entina hanovàna faritra eo amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fitsindronana fanafody simika
Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Jolay 2021
Afgan, tahaka ireo hafa mpamily fiarakaretsaka hatrizay, dia sahirana mitolona mifaninana amin'ireo fampiharana vaovao natao ho an'ny fiarakaretsaka
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Jolay 2021